Crypto: Aan mar kale ka dhigno GNU / Linux wax weyn! Iyadoo loo adeegsanayo Cryptocurrency? | Laga soo bilaabo Linux
Crypto: Aan mar kale ka dhigno GNU / Linux wax weyn! Iyadoo loo adeegsanayo Cryptocurrency?
Linux Post Ku Rakib | | dhowr
Dhamaanteen oo maalin walba noolaada oo xamaasad kujira Dunida GNU / Linux, midkood, sida maalinle ah ama Isticmaalayaal badan oo isku mid ah, sida Xirfadlayaasha IT-ga iyo / ama Horumariyayaal la xiriira, waan aqoonsanahay weyn, muhiim ah oo lama huraan ah waa maxay hada GNU / Linux, iyada oo qayb ka ah Adduunyada Barnaamijka Bilaashka ah iyo Ilaha Furan, meelaha sida supercomputing, xarumaha xogta (server), cilmi baaris cilmiyeed iyo kuwa kale oo siman ama ka muhiimsan.
Si kastaba ha noqotee, si GNU / Linux sida Nidaamka hawlgalka Weli waxay haysaa waddo aad u dheer si loo qabsado inta badan deegaanka desktop-ka ee kombuyuutarrada muwaadiniinta caadiga ah, guriga iyo xafiiska labadaba. Halka Software-ka Bilaashka ah ee Bilaashka ah iyo Mashaariicda Furan ee Furan sida Criptomonedas ayaa si weyn kor ugu kacay tobankii sano ee la soo dhaafay, tan iyo markii la soo saaray Seeraar. Sidaa awgeed, mid ayaa isweydiin kara: Maxaa la samayn karaa si looga faa'iideysto kobaca Cryptocurrency ee loogu talagalay GNU / Linux?
Qoraalkan ka faalloon mayno faahfaahin farsamo ama dhaqaale oo ku saabsan CryptocurrenciesSi kastaba ha noqotee, kuwa laga yaabo inay xiiseynayaan mowduucyadan, waxaan leenahay qoraallo hore in aan kugula talino aqrinta, waxaana ka mid ah kuwan soo socda ee isku xigxiga taariikh ahaan:
Latin America iyo Spain: Mashaariicda Blockchain ee leh Cryptocurrencies
Haa, horey ayaad u akhrisay kuwan iyo / ama kale oo ka mid ah daabacadahayada la xiriira Crypto World, ama aad taqaan mawduuca, iyo FinTech iyo / ama Defi, hubaal waad ogtahay kor u kaca iyo muhiimadda xilligan in Seeraar leeyahay, oo ku xigta Tikniyoolajiyadda Blockchain xilligan casriga ah iyo bulshada.
1 Crypto: Adduun bilaash ah oo furan
1.1 Sidee ayuu Crypto World u weyneyn karaa GNU / Linux?
1.2 Laakiin sidee taasi ku noqon kartaa?
Crypto: Adduun bilaash ah oo furan
Sidee ayuu Crypto World u weyneyn karaa GNU / Linux?
Gelitaanka mawduuca na xiiseynaya, way fiicantahay in markale la adkeeyo in, Cryptocurrencies waa wax soo saar falsafada horumarka xorta ah iyo furan, sida:
"Koodhka isha ee lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' badanaa waa furan yahay waana bilaash, sidaas awgeedna waxay dammaanad qaadaysaa suurtagalnimada in si joogto ah loola xisaabtamo softiweerka sidaas darteedna la hubiyo in aan wax ficil khiyaano ah lala fulin iyaga ama barnaamijyadooda taageera (Blockchain / Blockchain) , taas oo aan ka badnayn buug xisaabeed aan baahsanayn oo macaamil ganacsi ka diiwaan gashan yahay qaab dadweyne ama nus-dad ah iyo halka dheelitirku aanu ku xirnayn isticmaalayaasha, laakiin cinwaanada ay xukumaan". Crypto-Anarchism: Barnaamijka bilaashka ah iyo dhaqaalaha farsamada, mustaqbalka?
Sidaa awgeed, iyo ka goyn macquul ah, haddii bulshooyin badan oo dad ah, shirkado iyo xitaa dalalba ay bilaabeen inay haajiraan, labadaba hawlahooda ganacsi, maalkooda (maaliyaddooda) iyo xitaa suurtagal xitaa iyaga «Lacagaha Qaranka Fiat» kuwan teknoolajiyada baahinta iyo hantida loo yaqaan 'crypto crypto':
Sow caqli gal ma noqoneyso in GNU / Linux sidoo kale ay jihadaas u socdaan?
Laakiin sidee taasi ku noqon kartaa?
Xaqiiqdii dad badan, oo aan kujiro, waxay yeelan karaan fikrad ama soojeedin, waxay kuxirantahay heerka aqoonta ee goobta la sheegay ee farsamada iyo dhaqaalahaSi kastaba ha noqotee, si sax ah oo loo mideeyo labadan meelood ma ahan wax la yaab leh in, mar uun, Bulshada (Isticmaalayaasha, Ururada iyo / ama Aasaaska Wanaagsan) ee wareega GNU / Linuxiyo Software Free iyo Il furan yeelan karaan a Hantida rasmiga ah ee loo yaqaan 'crypto', oo u hoggaansamaysa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah Amniga, Asturnaanta, Magac la'aanta, Xorriyadda iyo Waxtarka in xubnihiisu dalbadaan ama filayaan.
Xaqiiqdii, inbadan oo naga mid ah waan ognahay in dadka quseeya ee ka socda GNU / Linux World ay jecel yihiin Richard Stallman ma laha aragti togan markay isku daraan Xawaaladaha + Dowladaha, oo sifiican ayaynu u ognahay mowqifkeeda wanaagsan ee ku wajahan tikniyoolajiyad lacag-bixin oo bilaash ah wac GNU Workshop, taas oo aan dhiirrigelinayn ama mudnaan u lahayn isticmaalka Hantida bilaashka ah ee furan, laakiin wuxuu dheereeyaa isticmaalka qadiim ah, lahaansho iyo xiran «Fiat Nidaamyada Lacagta». Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan GNU / Taler halkan ka akhriso.
Richard Stallman, kuma kalsoona bitcoin oo wuxuu soo jeedinayaa isticmaalka GNU Taler
GNU Taler 0.7 horey ayaa loo sii daayay, baro nidaamka lacag-bixinta elektaroonigga ah ee bilaashka ah
Si kastaba ha noqotee, iyo marka la soo gaabiyo, waxaan badanaa ka mid ahay kuwa aaminsan in a Xawaaladda rasmiga ah ee Beeshayada fududeyn kara oo kor u qaadi kara dadka isticmaala, jaaliyadaha iyo ururada, dhinacyada sida:
Deeqaha iyo maalgelinta mashruuca.
Magdhaw ama lacag bixin la siinayo shaqooyinka / gargaarka / adeegyada / codsiyada.
Kor u qaadista iyo balaadhinta GNU / Linux Distros.
Xaqiiqdii, "Yuu yahay" iyo "Sidee"Waxay noqon doontaa wax aad u xiiso badan in la arko sida ay wax u dhacaan. Dhanka kale, waqtiga ayaa sii socon doona si loo hormariyo, tikniyoolajiyadda oo ay weheliso, waana hubaal haddii Tikniyoolajiyadda Blockchain waxay ku egtahay guul adduunka dhaqaalaha adduunka, ma ahan wax la yaab leh in la arko sanado yar gudahood, maahan kuwo badan "Cryptocurrencies qaran" laakiin sidoo kale a Hantida rasmiga ah ee loo yaqaan 'crypto asset' ee Beeshayada.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan sidee «El Mundo Cripto» caawin koritaanka «Mundo GNU/Linux» meelaha bannaan ee aan la xakamayn, taas oo ka dhigaysa mid caan ah, faa'iido leh oo muhiim ah; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Crypto: Aan mar kale ka dhigno GNU / Linux wax weyn! Iyadoo loo adeegsanayo Cryptocurrency?
Shakhsiyan, waxaan kaliya taageeri lahaa lacagta loo yaqaan 'cryptocurrency' haddii ay leedahay nooc farsamo farsamo ah oo u oggolaan doonta aqoonsi la'aanta kuwa mas'uulka ka ah macaamil ganacsi, haddii ay dhacdo in booliisku uu aqoonsan karo (ama uu lahaa shaki aad u wanaagsan oo aasaas leh) in macaamilkan ugu dambeyn laga dhigay maalgelin. hawlo sharci darro ah oo aad u daran, sida argaggixiso ama filimada xunxun ee carruurta. Laakiin isla markaa waxaan jeclaan lahaa in luminta magac la'aanta ay ku dhici karto oo keliya duruufahaas, oo aysan ku dhici karin kuwa kale (sidaa darteedna, in farsamadu aysan u adeegin in laga saaro qarsoodiga isticmaalayaasha sharciga ah). Ma aqaano haddii wax sidan oo kale ah xitaa macquul ku yihiin heer farsamo, laakiin anshax ahaan, waa waxa kaliya ee aan u arko mid la aqbali karo.
100% lacagta dhijitaalka ah ee aan la aqoon waa wax aanan waligey taageeri doonin. Ugu adeegida dambiilayaasha xeedho lacag ah waa farsamo aan la ogaan karin si ay uga ganacsadaan ama u fuliyaan falalka ugu foosha xun, oo ay ugu yartahay halista. Marka tan la eego, waxaa badanaa la yiraahdaa "waxay ku sameyn doonaan ama la'aan la'aan", laakiin taasi waa been abuur isbarbardhiga beenta ah, maxaa yeelay laba xaaladood ayaa si khafiif ah isugu eg, sida haddii ay isku mid yihiin ama ugu yaraan isku mid yihiin, marka runta dhacdooyinka gebi ahaanba way ka duwan yihiin. U guurista ganacsi sida sawir-gacmeedka carruurta ee adduunka dhabta ah, waddada, aad bay u khatar badan tahay, iyo fursadaha ah in laga tago raadadka iyo raadadka dhammaan noocyadu way badan yihiin; booliisku wuxuu lahaan doonaa dariiqooyin badan oo uu ku soo gaaro (waana sababtaas sababta ganacsigaasi ugu dhawaaday inuu baaba'o 80-yadii). Taas bedelkeeda, ku sameynta internetka iyada oo loo marayo faa'iidada qarsoodi la'aanta buuxda waxay noqon kartaa wax aan macquul aheyn in la ogaado, sidaas darteedna xoogagga sharciga ayaa looga tagay gacmahooda. Taasina waxay la macno tahay in caddaalad la'aan looga tago dhammaan dhibbanayaasha (aka carruurta) ee ganacsiga la yiri, iyo dhammaan silica ay la kulmeen (oo xitaa naftooda ku waayey).
Dabcan, waan ogahay in tani ay sidoo kale leedahay jawaab celin: inaysan jirin wadar ahaan qarsoodi la'aanta shabakadaha, taasi waxay muujineysaa in dowladaha ay wax ka ogaan karaan wax walba oo ku saabsan muwaadiniintooda taasna dhab ahaantii waxay noqon kartaa mid khatar ah (mararka qaarkood * aad * khatar u ah), gaar ahaan dowladaha. keli taliyeyaasha sida Ruushka, ama kalitalisnimada sida Shiinaha (iyo xitaa dimoqraadiyadda sida EU ama USA, ma ahan wax ku habboon). Laakiin ugu yaraan xaaladahaas, illaa iyo inta ay jirto calaamadda dimuqraadiyadda, marwalba waa suurtagal in lagu dhaqaaqo dhaqdhaqaaqyada muwaaddiniinta oo laga soo horjeedo tallaabooyinka noocan ah, sharci lagu raadiyo x way, iwm. Meel loogu talagasho ayaa jirta. Dhanka kale, dadka caadiga ah ma tagi karaan oo ma badbaadin karaan carruurta ay afduubteen shabakadaha qaawan, taas oo ah sababta ay xaaladdoodu aad ugu sii daran tahay.
Ku jawaab Yoshiki
Waad salaaman tihiin, Yoshiki. Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga iyo waxtarka aad u fiican.
Haddii aad ku yeelan karto aqoonsi la'aan 100% tikniyoolajiyadda hadda jirta, waxaad isticmaashaa kaarka shabakadda (wireless) oo aan ku xirnayn internetka ama kombiyuutar la xaday (oo aan lagugu qaban kamarad ka xadaya), «aircrack-ng ( maktabadaha) »Si aad u fuudh yeelatid oo aad ugu xirto qof kale shabakadiisa (sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'WPA2'), monero (si aysan ula socon qadarka xannibaadda) iyo shabakadda Tor (si loo adkeeyo in lala socdo dambiilaha, cinwaanka IP-ga) ).
Taageerada 100% qarsoodi la'aanta sida Monero, dhibaatada isticmaalka lacagaha la raadsan karo (bitcoin) dhakhso ama goor dambe waxay horseeddaa faafreeb mana dooneysid in sharci fulintu ay mar uun garaacdo albaabkaaga sababtoo ah waxay u baahan yihiin lacagtaada si ay u maalgeliyaan dagaal ama si fudud kaaga xado, dhanka kale fiiri qeybta tabarucaada ee mashaariicda qaar ayaaba durba aqbalaya crypto goormaana aan ku deeqi karo (kaligay ma ihi)
https://guix.gnu.org/es/donate/ - (ma isticmaalo monero, laakiin tabaha waxaa macquul ah in la qariyo) iyo https://linuxmint.com/donors.php - (Kan wuxuu adeegsadaa monero waa meesha aan ugu deeqo).
Cyber ​​Punk iyo Crypto Anarchism
Salaan, Nemecis1000. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Ma aanan ogeyn wax ku saabsan mashruuca Guix, waana ku faraxsanahay in mar kasta oo aad awoodid, aad ugu deeqdo lacag Jaaliyadda.
Marka hore beta LibreOffice 7.1 ayaa la heli karaa
Salesforce waxay saxiixday heshiis rasmi ah oo lagu iibsado Slack